Franck Ribery: Cristiano Ronaldo Waxa Uu Iga Xaday Abaalmarinteydii Ballon d’Or Ee Sannadii 2013 | Raadgoob
Home Sports Franck Ribery: Cristiano Ronaldo Waxa Uu Iga Xaday Abaalmarinteydii Ballon d’Or Ee Sannadii 2013
Franck Ribery: Cristiano Ronaldo Waxa Uu Iga Xaday Abaalmarinteydii Ballon d’Or Ee Sannadii 2013
Franck Ribery ayaa shegay in abaalmarinta Ballon d’Or ee sannadii 2013 in isaga laga xaday.
Xiddiga Bayern Munich ayaa sheegay inay tahay wax aan la fahmi karin in Cristiano Ronaldo uu ku guuleystay abaalmarinta xilli ciyaareedkas ka dib markii uu xilli ciyaareed fiican kula riyaaqay kooxda Bundesliga ka dhisan.
Xiddiga Faransiiska ayaa ku hogaamiyay Bayern Munich koobka horyaalka Bundesliga waxaana uu sidoo kale ka caawiyay koobkii Champions League ee ay ka qaadeen Borussia Dortmund finalkii ka dhacay Wembley.
Guulaha ceynkaas oo kale waxa ay inta badan keentaa in ciyaaryahan uu ku guuleysto abaalmarinta shaqsiga ee ugu sareysa, laakiin Ribery ma uusan helin codadka waxaana ku guuleystay Ronaldo. Xaqiiqdiina kuma uusan dhameysanin xitaa kaalinta labaad oo waxaa ka galay Lionel Messi.
“Abaalmarintaas waxa ay ii aheyd sida in la iga xaday aniga” ayuu Ribery u sheegay Canal Football Club. “Ma ahan wax la fahmi karo. Waxaan ku guuleystay koob walba. Wax intaas ka badan ma qaban karin. Waxa ay aheyd cadaalad darro.”
Xiddiga reer France ayaa sheegay inuusan heli taageerada wadankiisa si uu ugu guuleysto abaalmarinta Ballon d’Or.
“Dalkeyga ima garab istaagin” ayuu yiri. “Indhaheyga ayaan ku arkay in Faransiisku ay yiraahdeen Cristiano ayay tahay inuu ku guuleysto. Miyay dadka reer Portugal doonayeen in abaalmarinta uu ku guuleysto Ribery ama Mess? Dabcan maya.”
Franck Ribery ayaa weli cadaawad u haya warbaahinta Faransiiska ka dib markii ay isaga eeda dusha ka saareen Koobkii Adduunka ee 2010 oo si ceeb ah ay France ku soo hareen.
“Sannadii 2010 waxa ay u baahnaayeen qof ay eedeeyaan” ayuu yiri. “Qof walba oo France jooga waxa uu aaminsanaa inaan anigu ahay dhibaatada – xitaa waalidkeey.
“Ma ilaawi kara talaabadii ay qaadeen qaar ka mid ah warbaahinta France. Waa dhaawac waligeey igu yaala, ka badbadis ayay aheyd.”
Qandaraaska Franck Ribery ee Bayern Munich ayaa waxa uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan
Previous PostDeg Deg Madaxweyne Biixi Oo Dalka Kusoo Guryo Noqday + Jawaabaha Xukumada Ee Safarka Next PostDanTDM oo YouTube ka sameeyay 12.3 milyan oo gini sannadkii 2017kii